1.ကျောက်ခေတ်အပြင်မြို့ရိုးကို Peeling သို့မဟုတ် tile ကိုအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုကွာ
ရေစိုခံ:ဒါကိုတော့ရေ seepage နှင့်ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
ဆောက်လုပ်ရေးကြေး:ရွှေလင်းတကုန်ကျစရိတ်,ဖယ်ရှားရေးကြေး,ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေကြောင်းကြေး,သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွန့်ပစ်ခြင်းကြေး,ပြင်ပမြို့ရိုးကို level ကြေး,tile ကိုပြန်လည်-ကပ်ကြေး,tile ကိုကျောက်ရုပ်ကုန်ကြမ်းကြေး.
ကြာရှည်ခံမှု:အုပ်ကြွပ်၏အသုံးပြုမှုကိုအလိုအရ,ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏အရည်အသွေး,နှင့် tile နည်းလမ်းများအကြားသက်တမ်းအတွင်းကွာခြားချက်,အဆိုပါဘိလပ်မြေသဲမျှရေစိုခံတဲ့ function ရှိပါတယ်,လူအပေါင်းတို့အမှတ်တံဆိပ်သုတ်ဆေး၏ waterproof5ထက်မပို-6 နှစ်.
လုံခွုံမှု:ရေယိုစိမ်မြို့ရိုးကိုကင်ဆာကဲ့သို့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်,ငလျင်လှုပ်,တိုင်ဖွန်းနှင့်အခြားအချက်များ.အဆိုပါ tile ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၏ပျက်စီးမှုကိုမြင့်မားသည်,နှင့် tile ကိုမိုဃ်းရွာစေမကြာခဏလူသွားလူထိခိုက်သေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်.
ကြာရှည်ခံမှု:တိုတောင်းသော,လက်ရှိလေထုအရည်အသွေး,အချေးအခွအေနေအရှိန်မြှင့်ရန်လွယ်ကူသည်,နွေရာသီအပူချိန် 60 သကဲ့သို့မြင့်မားသောဖွစျလိမျ့မညျ̊ကို C~80̊ကို C.
3.အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကို Peeling Paint
ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်:အနိမ့်,တူညီတဲ့အရွယ်အစား,ဆောက်လုပ်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ် tile ကိုအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်,ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အပြင်မြို့ရိုးကိုသို့မဟုတ်ဖန်ကုလားကာ.
ဆောက်လုပ်ရေးကာလ:အဆိုပါငြမ်း built ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်တို.
ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေါင်းစုံချမှတ်-အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားအသားအရေများအတွက်အလွှာအပေါ်ယံပိုင်းနည်းလမ်း,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကို Peeling,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ,အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုဆောက်လုပ်ရေး,အိမ်သူအိမ်သား Peeling,က refurbished အခါမင်းမျိုး၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုအောင်ဂျပန်နိပွန်စနစ်ကမူပိုင်ခွင့်သုတ်ဆေးသုံးပြီး,ဒါကြောင့်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏သက်ရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထား,ဆန့်ကျင်-ရေညှိ,အနာအထောက်အထား,ရေစိုခံခြင်းနှင့်အအေး.ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုရာပေါင်းများစွာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များနှင့်အတူ,သင်သည်သင်၏အမျိုးအဘို့လှပသောရူပရှာတှေ့နိုငျ.
အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားအသစ်သောအဝတ်ဖြင့်အစားထိုးနေသည်ဆိုပါက,အကျိုးသက်ရောက်မှုကယ့်ကိုမဖုံးနေသည်.နေသမျှကာလပတ်လုံးကထိုင်ပေမြို့အတွက်ယေဘုယျတည်နေရာဖြစ်သကဲ့သို့,တစ်ခုချင်းစီကို ping ရဲ့များ၏စျေးနှုန်း 80 မှ 70 တိုးပွားလာနိုင်ပါသည်,ping ရဲ့နှုန်း 000,ဒါပေမယ့်ကအထက်တန်းလွှာအဆောက်အဦးထဲမှာပါလျှင်,အသီးအနှံကိုအနည်းဆုံး 20%.
တိုက်ခန်း၏အပြင်ပန်းရိုးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကုန်ကျစရိတ်၏တွက်ချက်မှုအသီးအသီးပိုင်ရှင်ကပိုင်ဆိုင်တိုက်ခန်း၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်အပေါ်အခြေခံသည်.တစ်ခုတည်းသောအပြား၏စျေးနှုန်းကွာခြားသည်.အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် site ၏ဆောက်လုပ်ရေးအခြေအနေများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်မှာကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောကြောင့်.ဆုံးဖြတ်ရနိုင်သလား.
တိုက်ခန်းအားလုံးအိမ်ထောင်စုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ကို ထောက်.,တိုက်ခန်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံတစ်ချိန်က'အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုလိုအပ်ပါသည့်,ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်ခုလုံးကိုအိမ်နီးချင်းနှငျ့ဆကျသှယျအပေါင်းတို့နှင့်အိမ်ထောင်စုများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.ဒါပေါ့,အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအိမ်ထောင်စုအားဖြင့်မျှဝေရပါမည်.အဆိုပါတူညီပြီးပမာဏတွက်ချက်မှု၏နည်းလမ်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်.ယေဘုယျအားဖြင့်,ဒါဟာသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်&quote;ping ရဲ့နှုန်းယူနစ်စျေးနှုန်းနှုန်း&quote;နှင့်&quote;ping ရဲ့အချိုး&quote;.Ping ၏တွက်ချက်အရေအတွက်အိမ်ထောင်စုအတွက် Ping ၏နံပါတ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု့.
(ပိုင်ရှင်၏ကွဲပြားခြားနားမှု'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု Ping ့/အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု Ping)x ကစုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်,တစ်ခုချင်းစီကိုအိမ်သူအိမ်သား ping ရဲ့နှုန်းကုန်ကျစရိတ်(ping ရဲ့နှုန်းယူနစ်စျေးနှုန်း),အိမ်သူအိမ်သားရှယ်ယာနှုန်းစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်/ပိုင်ဆိုင်သူ'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု့(ping)သို့သျောလညျး,အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်များတူညီ၏ကုန်ကျစရိတ်များ,ကတထောင်အများအပြားယွမ်ယူစေခြင်းငှါ.ထိုကွောငျ့,အိမ်ထောင်စုများ၏အများဆုံးပေးဆောင်ဖို့လိုလိုလားလားရှိလျှင်ပင်,အိမ်ထောင်စုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,အနည်းငယ်သောအိမ်ထောင်စုငွေပေးချေမှုလည်းမြင့်မားကြောင်းတိုင်ကြားသောကြောင့်,.သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးသဘောတူညီမှုရောက်ရှိရန်ခက်ခဲ.သို့သျောလညျး,2019 ခုနှစ်,အစိုးရကလည်းတိုက်ခန်းများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်,ပြင်ပနံရံပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့အတွက်လျှောက်ထားရန်ဒေသခံများကပေး.ပြင်ပနံရံများပေါ်တွင်ပြုပြင်မှုများထွက်သယ်ဖို့လူအားပေးနိုင်ရန်အတွက်,အဆိုပါခရိုင်များနှင့်မြို့အစိုးရများအနေနဲ့တိုက်ခန်းခွဲတမ်းအစီအစဉ်ရှိ.တစ်ဦးချင်းစီစီရင်စုနှင့်မြို့၏မြို့ update ကိုရုံးကလျှောက်လွှာနည်းလမ်းအကြောင်းကိုမေးတယ်.
ဘယ်အချိန်မှာကဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုများမှကြွလာ,အဆိုပါခရိုင်များနှင့်မြို့ကြီးများအနည်းငယ်ကွဲပြားကြသည်.ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် Xinbei စီးတီးကိုယူ.1.အဆိုပါသဘောတူညီချက်မှုနှုန်းကို 100 ဖြစ်ပါတယ်%.2.အဆိုပါအဆောက်အဦတစ်နှစ်ထက်ပိုမို 15 နှစ်ဖြစ်ပါတယ်.3.သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုအဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်: &quote;ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်ကျော်ဖြစ်ကြပြီးကျော်ကိုငါးနှစ်ဆက်တိုက်အဆောက်အဦးများ&quote;နှင့်&quote;အဟောင်းနှစ်စုံ-ပွင့်လင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုငျဆငျကွန်ဒို&quote;,ဒါပေမယ့်ရန်ပုံငွေများ 50 ထက်မပိုသင့်တယ်%စုစုပေါင်းစီမံကိန်းအတွက်ရန်ပုံငွေ,10 သန်းယွမ်တစ်ဦးမျက်နှာကျက်နှင့်အတူ.
ထို့အပြင်,ပြင်ပရိုးဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်း,အဆိုပါဒေသခံများကယာယီနေထိုင်ရာရှာတွေ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး,ဒါမှမဟုတ်သူတို့အိမျ၌နထေိုငျဆက်လက်နိုင်ပါတယ်;ဖန် Zhongye လည်းဟောင်းအိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြီးနောက်ကြောင်းထောက်ပြ,အိမ်သူအိမ်သားစျေးနှုန်းနှင့်ငှားရန်ချက်ချင်းထမြောက်ကြလိမ့်မည်,အသီးအနှံကိုအနည်းဆုံး 10 ဖြစ်ပါသည်%.ကတည်နေရာကောင်းတစ်ဦးဧရိယာ၌တည်ရှိသောလျှင်,အသီးအနှံကိုအတော်လေးပိုကြီးဖြစ်ပါသည်.ဥပမာ,အဆိုပါ Donghua အဆောက်အအုံ,ထိုင်ပေစည်ပင်သာယာအဆောက်အဦးဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိသည်,နီးပါးဆောက်လုပ်ရေးပြီးနောက်စျေးနှုန်းနှစ်ဆတက်ထားပါတယ်,နှင့်ဝေးစီးပွားရေးစက်ဝိုင်းထဲမှာအပြာရောင်က Sky Hyatt အဆောက်အဦးကိုလည်းဗိသုကာသားရေတစ်ဂန္လက်ရာဖြစ်ပါသည်.
အစဉ်အလာဗိသုကာ Peeling ပထမဦးဆုံးပြင်မြို့ရိုးကိုကြွပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်,အဟောင်းကိုယွန်းမျက်နှာပြင်ရိတ်,ပြီးတော့နံရံနဲ့သံမဏိသံချေးများနှင့်သံချေးဖယ်ရှားပြုပြင်.အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးကာလရှည်လျားသည်;ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစားရိတ်ရွေးချယ်မှုအရသိရသည်ရှေးခယျြထားခြင်းဖြစ်သည်.အဆိုပါအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ6ကနေအထိ,7 000 ယွမ်,စတုရန်းမီတာလျှင်သို့မဟုတ်သောင်းချီယွမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏ 000 ယွမ်.သို့သျောလညျး,အရေပြားစီမံကိနျး၏အစဉ်အလာဆောက်လုပ်ရေးအချိန်ဖြစ်ပါသည်-စားသုံးနှင့်အလုပ်သမား-ပြင်းထန်သော,မကြာခဏဆူညံသံထုတ်ပေး,စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်!
ထိုကဲ့သို့သောဥရောပအဖြစ်အဆင့်မြင့်နိုင်ငံများ,အမေရိကတိုက်,နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံပြီးသားအုပ်ကြွပ်အစားထိုးဆေးသုတ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြ!စီမံကိန်းကိုကွာနောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦးများကိုတိုက်ရိုက်အိမ်၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရှေးဟောင်းသုတေသနမှအဆင်းလှသောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေဆေးသုတ်ကူးပြောင်းနေသည်;အခြားအညံ့အပြင်မြို့ရိုးကိုအဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,ChengLin ဆန်းသစ်အဆောက်အဦးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုစနစ်,ဒါဟာနိပွန်နိပွန် Paint ချမှတ်,မဟုတ်တဲ့အရာ-အဆိပ်သင့်,မဟုတ်တဲ့-ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မဟုတ်တဲ့-မီးလောင်လွယ်.ဒါဟာအစဉ်အလာအဆီပြန်ကြွေပိုမိုပါးလွှာ၏ခိုင်ခံ့သောအနံ့အနံ့များနှင့်အဆိပ်များထုတ်လုပ်ပါဘူး.ဒါဟာ 30 ကျော်နှစ်ပေါင်းသုံးနိုငျနှင့်ပြင်ပမြို့ရိုးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူသည်.ရောင်စုံအားသာချက်များကိုကျော် 1000 မျိုးနှင့်အတူ,ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ကော်နှင့်ရေစိုခံဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး,ပြင်းပြင်းထန်ထန်မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုတွဲနိုင်ပါ,ဆောက်လုပ်ရေးအခုလဲအခါတိုက်ရိုက်မဆိုအဆောက်အဦးပစ္စည်းများဖြည့်နိုင်ပါတယ်,အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အချိန်ကိုဖျက်သိမ်းရေး,လည်းရေတားဆီးမြို့ရိုးအသို့စိမ့်ဝင်သွားတယ်,လုံးဝသဘာဝပျက်စီးစော်ကားမှုများနှင့်မြို့ရိုးကိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချ.
ဆေး၏ဆောက်လုပ်ရေးအရေပြားစီမံကိန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပိုပြီးဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်-အခမဲ့.ကိုယ်ကသာတကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်-တတိယအလုပ်ချိန်နှင့်တဦးတည်း-အဆိုပါ tile ကိုနည်းလမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်၏ထက်ဝက်,နှင့်အဆောက်အဦအသားအရေကိုအလွယ်တကူပြီးစီးနိုင်ပါတယ်,နှင့်အဆောက်အဦး၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်လုံးဝတငျ့တယျနှင့်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်.ထက်ပိုမို 1 မှ Choose,000 ကြွယ်ဝသောအရောင်များ,ဒီဇိုင်းစတိုင်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ,ခြင်း simulation ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးဖန်တီး,နှင့်အနာများနှင့် antibacterial တားဆီးနိုင်ပါတယ်.
ယနေ့ခေတ်,မြို့ပြသက်တမ်းတိုးများ၏အရှိန်အဟုန်အရှိန်မြှင့်နိုင်ရန်အတွက်,အားလုံးခုနှင့်မြို့ကြီးများ application များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးများ,စျေးနှုန်းချိုသာသည့်သားရေများဆောက်လုပ်ရေးအောင်,အဆိုပါပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအိမ်များပိုကောင်းရောင်းချစဉ်,နှင့် ChengLin အသုံးပြုတဲ့ဆန်းသစ်နိပွန် Paint system ကိုချွတ်လဲလွယ်ကူပြီး chip ကိုမအဆိုပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး,ကြောင့်မြေငလျင်မှစိုးရိမ်ရေမှတ်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်,နှင့်အဆောက်အဦကြည့်ပိုပြီးတက်ကြွအောင်.
ဘေဂျင်း Aidi ကျောင်း,ဂျပန်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့'နိပွန် Paint ဟာအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုရှေးဟောင်းသုတေသနမှည့်,တောက်ပပြီးလှပဖြစ်ပါသည်.
6-အဆိုပါ unremovable အုတ်အဆောက်အဦးအမှတ်အားသာချက် Lapi နှင့် ChengLin ဆန်းသစ် refurbished စနစ်ကစာဖတ်ပြီးနောက်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်:
2.တိတ်ဆိတ်သော:ဒါဟာ tile ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်အပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ညှိပြီးနိုင်ပါသည်.အဆိုပါအုတ်ဆူညံသံမှအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အိမ်နီးချင်းများ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်.
3.က Short ပြုပြင်အချိန်:အဆိုပါအုပ်ကြွပ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုအပ်,ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်သာ 1/အစဉ်အလာ 3.
4.ဘတ်ဂျက်အများကြီး Save:နေသမျှကာလပတ်လုံးကုန်ကျစရိတ် 1 ဖြစ်သကဲ့သို့/အဆိုပါ tile ကို 2,ဆန့်ကျင်-fouling နှင့်ရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှု tile ကိုကျော်2ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်,တိုက်ရိုက်အနာဂတျမှာသန့်ရှင်းရေးများ၏အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေရာ.
5.ပိုမိုစုံလင်လာဒီဇိုင်း:အရောင်များနှင့်ပုံစံများထက်ပိုမို 1000 မျိုး,အဆိုပါနေရာချထား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်,ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ဗိသုကာပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီးရန်.
6.မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံရေး:အလေးချိန်ကတော့ tile ကိုအပေါင်းတို့နှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးဖြစ်ပါသည်,အဆောက်အဦး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအလေးချိန်မတိုးဘူး,နှင့်အဆောက်အဦခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးပွါး.
1.အဆောက်အဦး Peeling နေရောင်မှအိမျတျောကို restore နှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်နိုင်ပါတယ်.
2.သင့်အနေဖြင့်ပြင်ပမြို့ရိုးကို refurbishing အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမြို့ရိုးကိုကင်ဆာသို့မဟုတ်အုတ်ရေတံခွန်အဖြစ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်.
သစ်ထိုင်ပေမြို့အစိုးရအတွက်,နေသမျှကာလပတ်လုံးကပိုင်နက်တွင်တည်ရှိသည်အဖြစ်,နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဧရိယာအတွင်းဥပဒေရေးရာအဆောက်အဦဖြစ်ပြီး, ထက်ပိုမို 15 နှစ်၏မိသားစုအသက်အရွယ်ရှိပါတယ်,သငျသညျအဟောင်းအိမ်တော်အဘို့လျှောက်ထားရန်လိုလျှင်,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သားဖွဲ့စည်းပုံမှာဒါမှမဟုတ် 4th နှင့် 5th ကြမ်းပြင်,သင်တိုက်ခန်းတစ်ခုဓာတ်လှေကားရှိပါက,သငျသညျဖက်စ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအားဖြင့် Laojiao Lapi ဝန်ဆောင်မှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ကျူရှင်အသင်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.သင်ကဗိသုကာပညာရှင်များထံမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကွံဉာဏျစေနှင့်လုံလောကျရှိ, မရှိခြေရင်းများ၏အခြေအနေများထောက်ပံ့ငွေများ၏အတိုင်းအတာနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိမရှိအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.တစ်ခုကဓာတ်လှေကားဒါမှမဟုတ်ကဲ့သို့အာကာသမှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,အဟောင်းကိုအိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်,သစ်ထိုင်ပေမြို့အစိုးရပြည်သူ့ application ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်များအတွက်လျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်“မြို့ပြသက်တမ်းတိုးနဲ့ Maintenance ပံ့ပိုးမှု”သြဂုတ်လ 1 ရက်မှဒီဇင်ဘာ 31 မှ,108.ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီအများဆုံးပမာဏကို 50 ဖြစ်ပါသည်%.ကမဟာဗျူဟာမြောက်ဧရိယာ၌တည်ရှိသောလျှင်,ဒါကြောင့် 75 မှတိုးမြှင့်ရမည်ဖြစ်သည်%.စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေ NT ထက်မပို$10 သန်း.
အဆိုပါ Taichung စီးတီးအစိုးရလက်ရှိအသက်အကြီးဆုံးအိမ်ယာရန်ပုံငွေများ subsidizing ဖြစ်ပါတယ်,ထိုင်ဝမ်အတွက်အမြင့်မားဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်,75 ဦးရေအများဆုံးထောက်ပံ့ငွေအချိုးအစားနှင့်အတူ%.ယင်းမှအဆိုပါပြင်ဆင်ချက်“အဆောက်အအုံအခင်းအကျင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခင်းအကျင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး Grant က”အဆိုပါ fa ပေးçအရည်အချင်းပြည့်မီအဟောင်းအဆောက်အဦး၏ Ade ပြုပြင်.ထိုကဲ့သို့သောအစိမ်းရောင် beautification ၏အသွင်အပြင်အတိုင်းရန်ပုံငွေခွဲတမ်း၏တစိတ်တပိုင်း,နှင့်ကျောက်စိမ်းကိုဆွဲဆောင်ဖို့အုတ်ပစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
Taichung စီးတီးစည်ပင်သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဗျူရိုအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအင်ဂျင်နီယာရုံးတစ်ဦးချင်းစီအမှုများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေခွဲတမ်း 45 ကဆိုသည်%စုစုပေါင်းစီမံကိန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၏,75 မှတက်%;နှင့် 5th ကြမ်းပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဟောင်းတိုက်ခန်းများဓာတ်လှေကားပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားကြသည်,နှင့်ထောက်ပံ့မှုများအတွက်လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.အဆိုပါစီမံကိန်းအား 10 သန်းယွမ်ထောက်ပံ့ငွေပါလိမ့်မည်,နှင့်လက်ခံမှုများအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်.
ထောက်ပံ့ကြေး၏ scope:အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုမှာအသက် 15 နှစ်ကျော်ကိုတည်ဆောက်ဘို့လိုအပ်ပါသည်.
‧စဉ်ဆက်မပြတ်အဆောက်အဦးများသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း-ထက်ပိုမို5အဆောက်အဦးများနှင့်အတူမိသားစုအဆောက်အဦးများ.
‧လမ်းပေါ်မှာလျှောက်တွင်6ကြမ်းပြင်နှင့်အထက်အဆောက်အအုံများ.
‧မျက်နှာစာပြုပြင်အကျင့်ကိုကျင့်,fa အပါအဝင်çAde သံပြတင်းပေါက်,ပြင်ပလေထု-အေးစက်,ပိုက်လိုင်းများ,တွန်းထိုး-လသာဆောင်နှင့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များထွက်.
‧ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အစိမ်းရောင် Landscaping စီမံကိန်းကို.
‧အလုပ်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦး၏စွမ်းဆောင်မှုနှင့် shared အဆောက်အဦ၏ရှုခင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ.
အဆိုပါ Taoyuan စီးတီးအစိုးရပုဂ္ဂလိကပျင်းရိဟောင်းအိမ်၏ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်.အဆိုပါ&quote;ဟောငျးအိမ်များများအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် Revit အစီအစဉ်&quote;မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူရိုများကရာထူးတိုး's ကိုအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏ဒုတိယမြောက်နှစ်တွင်သို့ ဝင်. ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင်ယခုဖွင့်ထားပါတယ်(108).လျှောက်လွှာ၏အမှု၌,ငါ၏အနှစျတှငျဟောင်းအိမ်သူအိမ်သား activation ထောက်ပံ့ငွေထံသို့ ဝင်.(107),ငါတစျဦးအမှုအတွက်ပြုပြင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ,Tomioka ဟောငျး Street Journal နှင့် Tomioka ရထားဘူတာများအတွက်နေရာအသစ်ဖြစ်လာ.
အဆိုပါ&quote;108 ၏အကြံပြုစီမံကိန်း-တစ်နှစ်ဟောငျးအိမ် Revit နှင့် Revit Project မှ&quote;သုံးပစ္စည်းများပါဝင်သည်:အဟောင်းကိုအိမ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေး,အဟောင်းကိုအိမ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အဟောင်းအိမ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ.တစ်ဦးချင်းစီအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အများဆုံးခွဲတမ်း.400,000 ယွမ်,မိုးလုံလေလုံပြုပြင်ရေးများအတွက်အများဆုံးထောက်ပံ့ငွေ 900 ဖြစ်ပါသည်,000 ယွမ်.အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ activation,အများပြည်သူရေးရာ,အများပြည်သူပြပွဲ,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုနှင့်အခြားစီမံကိန်းများအတွက် 10 လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်,အသုံးပြုသူများသည်ဖန်တီးဖို့ 000 ယွမ်,ပိုင်ရှင်များနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ.အောင်မြင်,အဟောင်းကိုအိမ်သူအိမ်သား activated ပါစေ,မရှိတော့ပျင်းရိ.
108 နှစ်အတွင်းဤစီမံကိန်းများအတွက်လျှောက်လွှာများအပြင်,ဒီနှစ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းရာထူးတိုး&quote;ဟောငျးအဆောက်အအုံထိန်းသိမ်းရေးပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်&quote;,မြင့်မားသောဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ထားရာ,50 လောက်ထောက်ပံ့%ပုဂ္ဂလိကအဟောင်းအိမ်များများအတွက်ရန်ပုံငွေ,နှင့်ပိုပြီးလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အဟောင်းအိမ်များမြှင့်တင်ရန်လူတွေကိုအားပေးအားမြှောက်.ပွနျလညျနှင့် activation ကိုထိန်းသိမ်း.